Internet sy fizarana: fanalahidy roa amin'ny fampiasana mahomby ny GNU / Linux | Avy amin'ny Linux
Internet sy fizarana: fanalahidy roa amin'ny fampiasana mahomby ny GNU / Linux
Ity lahatsoratra ity dia nosoratan'ny naman'i Ny vondron'olona rindrambaiko maimaimpoana kiobàna ho an'ny GUTL Portal ary tiako ho entina eto aminao izany mba hampisehoana aminao ny iray amin'ireo tombony lehibe amin'ny fampiasana Free Software: "Mizara".
by: Delio G. Orozco González.
Talen'ny Archive Archive.
Manzanillo avy any Kiobà.
Ireo tsipika ireo dia voasoratra amin'ny solosaina finday misy marika HASEE, miaraka amina karatra video: Silicon Integrated Systems [SiS] 771/671 PCIE VGA Display Adapter (rev 10) , iray amin'ireo famoronana tsy fahita firy mamela ny lohantsika hirehitra; ny rafitra miasa manome fiainana azy dia Debian 6, ny mpandika teny dia LibreOffice 3.4.4 ary ny hafaliako dia ilay zanaky ny artifact ilay vahaolana. 1280 × 800.
Raha ny heriko dia nisy dikantenin'i Windows XP izay mbola tsy hitako mihitsy, io dia iray amin'ireo fanaingoana marobe, heveriko fa amin'ny fomban'ireo tsy raharahaina, izay tsy isalasalana fa nanampy anay tamin'ny fotoana iray satria tsy nila nopotehina izy ireo. Mpiankin-doha toa ahy amin'ny filozofia SWL, tsy fanatisme, fa avy amin'ny fanatisme ka hatramin'ny "fanatic" -milaza fahendrena namana efa maty-, tsy misy dingana iray intsony, nanapa-kevitra ny hamafana ny famoronana Bill Gates ary apetraka ny famoronana ny Ian Murdock; tsara, noho ny firaisankina (vakio ny fizarana), voalohany amin'ny Alberto Garcia Fumero ary rehefa afaka izany Meneses Abela sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny foibem-paritry ny ICU ao Granma, manana ny repo nohavaozina aho amin'ity fizarana mahatalanjona an'ny Linux; ary tsy mila lazaina intsony -Mba fantatr'izy ireo amin'ny zavatra niainany-, ny fananana repo isan'andro dia ao amin'ny tontolon'ny SWL, nahazo ny 90% tamin'ny ady.
Miaraka amin'ny iso an'ny Debian 6.0.1a eny an-tànako no nanomboka ny asako ary ny zava-drehetra dia fifaliana mandra-pahatongan'ny fotoana nanandramako nanova ny famahana ny efijery 14.1 santimetatra, fantsakana 800 × 600 tsy nitranga. Amin'ny fampisehoana ny refy toy izany ary miaraka amin'ity fanapahan-kevitra ity, ny ampahany amin'ny varavarankely dia ivelan'ny sehatry ny asa, ilaina ny manetsika tsy tapaka ny horonan-taratasy ary ny endrika miiba amin'ireo litera sy sary dia tsy mahafaly velively. Ka nankany amin'ny repo-ko aho, nametraka mpamily betsaka toy ny tao amin'ilay famaritana hoe "sis" fa very maina daholo izany; Notadiaviko avy eo ny rakitra iray izay misy zavatra itovizany "Xorg", na izany aza, tsy nahita na inona na inona aho, afa-tsy ny fisie sasany tao / usr / share / doc fa tsy nanao na inona na inona izy ireo tamin'ny fomba fijery mavitrika, hoy aho.
Avy eo ny fanapahan-kevitra dia tsy mety afa-tsy ny manoratra amin'ny lisitry ny GUTL ary, manokana, mpiara-miasa izay inoako fa afaka manampy ahy. Novaliana ny fanoratako; Saingy tsy nisy ny vahaolana na inona na inona ary ary tsy afaka nandeha izy satria tsy resaka setting io, fa an'ny mpamily, "fa tsy fantatro", hoy ny tononkiran'i Enmanuel taloha; Na izany aza, ilaina ny fampahalalana nomena satria nianatra zavatra vaovao aho ary mino ahy rehefa milaza aminao aho: ny fahalalana dia tsy mavesatra, na mihoatra, na maka toerana ary mendrika foana, miaraka aminao na aiza na aiza alehanao ary tsy toy ny savony, vao mainka mampiasa azy ianao, vao mainka mihalehibe.
Ny fampiharana ny rafi-pitsapana sy ny lesoka dia nesoriko ny xerver-xorg-vesa ary voila!, nanjavona ilay interface grika satria na dia novokarin'i Rafitra mifangaro Silicon, tsy miasa miaraka aminy xerver-xorg-sis inona no entin'ny rafitra; fa, miaraka amin'ny an'ny JEREO NY. Na izany aza, tsy maintsy nianatra aho fa hiteny ianao, ary namerina namerina indray aho Debian 6; talohan'izay dia nanandrana aho Xubuntu 10.04, miaraka amin'ny fanaingoana ny Debian amin'ny LXDE izay nataon'ny mpiara-miasa amintsika Félix Pupo; fa tsy nisy, na ny écran voalohany aza nipoitra.
Noho izany, nitady fampahalalana tamin'ny Internet aho ary nahazo mpamily izay napetraka haingana sy haingana tao amin'ny solosaina findainy aho; namerina nanantena aho fa tsy nety ihany koa, nisy ny fifandonana namono ny GUI indray. Ny haavon'ny fahasosorana dia nahatonga ahy handray fanapahan-kevitra mamoy fo: apetraho Windows 7 Servipack 1 satria -milaza izy ireo-Ny habean'ity OS ity dia noho ny karazan'ireo mpamily izay manohana azy; na izany aza, miaraka amin'ilay karatra 771/671 PCIE VGA Display Adapter (rev 10) novokarin'i Rafitra mifangaro Silicon Tsy dia mora ilay izy, ry vahoaka Silicon Valley nahavita nitondra ilay vahaolana ihany 1280 × 768 ary ny famaritana ny litera dia tsy optimum, antenaina, nanao azy ny mpanamboatra 1280 × 800.
Amin'izay fotoana izay dia nisy hevitra iray nanimba ny fanahiko: "Hampidina ny mpamily ho an'ny Windows aho ary hivarotra ilay HASEE mahafaly", rehefa dinihina tokoa, miaraka amin'ny vola ateraky ny hetsika fividianana sy fivarotana dia afaka nanandrana naka solosaina iray izay hanome kely aho aretin'andoha ary ataovy mahafinaritra kokoa ny fampiasana Linux; Na eo aza izany, ary satria fantatro fa ny vorona eo an-tànany dia manidina manidina zato, dia nanapa-kevitra ny hanao andrana farany aho. Tonga teo amin'ny iso of aho avy eo Molinux Zero, Distro minimalista Espaniola nahazo aingam-panahy avy amin'ny Puppy linux, ary inona no hahagaga ahy mahita azy nahavita nitondra ilay vahaolana 1280 × 768 miaraka amin'ny famaritana ny tsipelina avo kokoa noho izay nomen'ny Windows 7.
Nahatsapa fahafaham-po aho noho ny zava-bita, nanao ny hevitra tao amin'ny lisitry ny GUTL ary, mazava ho azy, nahazo ny famporisihan'ny namako aho. Ankehitriny, tamim-panahy ambony dia niverina tany amin'ny Internet aho ary nahita tao amin'ilay adiresy http://www.vivaolinux.com.br/index.php, (Pejy Breziliana), ilay lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe "Driver SIS 671/771 + Xorg fa tsy Ubuntu Lucid Lynx"; Soa ihany, fiteny portogey ny Portiogey, nalaina avy amin'ny latinina toa ny Espaniôla, ary namaha ny zavatra voalaza fa tsy sarotra; Ankoatr'izay, ny fanazavana notohanan'ny baiko sy ny zotra dia nanamora ny asa.
Ny mpanoratra ny lahatsoratra, Jakson Galeti, dia nanolotra ny rohy hampidina ireo mpamily mandritra ny 32 sy 64 bit miankina amin'ny maritrano, ao anaty rakitra izay tsy mihoatra ny 265 Kbytes (Milanja eo anelanelan'ny 17 sy 18 Mbytes ny lanjan'ny Windows), voafintina anaty rakitra tar.gz. Nandritra ny fotoana nanolorana ny vahaolana Ubuntu, Tsapako tato am-poko fa mety hiasa ao amin'ny distro ray aman-dreny ihany koa izy, ary azoko atao ny nahazo ilay karatra fikomiana mba handray ny vahaolana mety indrindra amin'ny 1280 × 800.
Tsy lahatsoratra siantifika io ary tsy tokony ho malaso amin'ny famaranana ny fehin-kevitra; Na izany aza, ny traikefa nofaritana dia mampiseho fa ny fizarana fahalalana sy ny fahazoana azy amin'ny alàlan'ny Internet dia lasa miovaova filaharana voalohany amin'ny fampiasana mahomby ny GNU / Linux; Hadinony ve ny fomba nampahafantaran'ny Torvalds ampahibemaso ny heviny ary teraka ny tetikasa? Eny tokoa, hisaorako an'i Galeti aho tamin'ny fandraisany anjara ary apetrako amin'ny wiki ny tutorial GUTL satria fantatro fa mpiara-miasa maro no tsy mahazo miditra amin'ny Aterineto ary ny fizarana fahalalana sy fampahalalana dia lasa rafitr'ilay filozofianay ary satria raha tsy izany dia tsy dia mitondra lohateny firy ireo andalana ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Internet sy fizarana: fanalahidy roa amin'ny fampiasana mahomby ny GNU / Linux
patrizio santoyo dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara, antenaina fa hieritreritra sy hanao toy izany ny rehetra, satria izany no nianarako tsikelikely ny fampiasana Linux.
Tsy afaka tsy hiteny aho fa mitsidika an'ity bilaogy ity isan'andro aho satria tena manampy ahy tokoa ny mahita sy mamaha ireo olana mitranga ao amin'ny Debian ahy.
Mahafinaritra ny asa ataonao: "avy amin'ny Linux".
Mamaly an'i patrizio santoyo
elav <° Linux dia hoy izy:
Tongasoa patrizio santoyo:
Misaotra betsaka tamin'ny hevitrao, really
Valio amin'i elav <° Linux
Misaotra anao mitsidika anay ary manome ny hevitrao, 🙂
Tantara an-tsary mahaliana. Mampiseho fotsiny izany fa tsy mila manao toa ny mpampiasa maro izay avy amin'ny Windows ianao, fa misy distro sasany tsy miasa ho azy ireo amin'ny voalohany ary apetrany eo ankilany ny Linux. Raha mila zavatra miasa ianao dia aza raisina ho azy fa ataovy ihany koa ny anjaranao.
Miarahaba ny mpanoratra avy amiko, tantara tena tsara 😉
Carlos-Xfce dia hoy izy:
Nisy zavatra toy izany nitranga tamiko indraindray hatramin'ny nandehanako tamin'ny Linux. Tamin'ny fotoana rehetra dia nahatsapa aho fa nifandray tamin'ilay nanoratra ilay lahatsoratra, heh heh.
Valiny tamin'i Carlos-Xfce
Ny marina dia izao no zavatra tsara (na dia misy milaza ny zavatra ratsy aza) amin'ny tontolon'ny GNU / Linux, misy hatrany ny fomba hampandehanana ny zavatra, misy olona any ho any efa nanandrana azy, ary vao mainka aza izany. zavatra ianaranao eny an-dalana. Araka ny voalazan'ny fanehoan-kevitra teo aloha, nahatsapa aho fa voamarina ary nifanaraka tanteraka ilay andian-teny, satria raha tsy misy ny Internet dia mety ho sarotra be izany rehetra izany.
Tantara mahafinaritra be. Aza kivy.
Intel dia manolotra amin'ny fomba ofisialy ny LibreOffice hisintona ao amin'ny AppStore
Logo an'ny Firefox ao amin'ny University of Cuba